Kulankii Golaha Shacabka oo mar kale maanta baaqday iyo buuq weli ka taagan ajandaha kulanka – Banaadir weyne
Kulankii Golaha Shacabka oo mar kale maanta baaqday iyo buuq weli ka taagan ajandaha kulanka
Waxaa maanta Isniin ah mar kale baaqday kulankii 1-aad ee Golaha Shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee Kalfadhigiisa 5-aad, iyadoo Xldhibaanada saqdii Dhexe ee Xalay loo diray fariin lagu ogeysiinayo inaanu jirin kulan.
Sida wararku sheegayaan sababta baaqashada kulanka ayaa la xiriirta cabsi Guddoonka baarlamaanka ay ka qabaan inuu buuxsami waayo Kooramka uu ku furmi lahaa kulanka maanta, iyadoo xuuraansi ay sameeyeen Guddoonka ku ogaadeen in Xildhibaano badan in aanay imaaneyn kulanka haddii la furo, taas bedelkeed ay kulanka baajiyeen.
Xildhibaan C/risaaq Axmed Maxamed (Jindi) oo katirsan Baarlamaanka ayaa Warbaahinta gudaha u sheegay inay jirto maamul xumo baahsan oo dhinaca Guddoonka baarlamaanka ah, taasoo sababtay inuu wali furmi la’yahay Kalfadhiga 5-aad kulankiisa 1aad.
Waxaa uu sheegay in xubnaha Xukuumadda ee hay’ada Sharci dejinta ka tirsan aysan dooneyn inay yimaadaan kulanka si fadhiga loo gudo galo, taasoo uu ku sababeeyay in aysan u dulqaadan karin dhageysiga dhaliilaha Xukuumada ee dhinaca Amniga.
Kalfadhigan 5-aad oo Madaxweynaha uu furay 27-kii bishan ayaa wali waxaa la suurta galin la’ furitaankiisaa kulanka 1-aad, iyadoo arrintaa ay banaanka u soo saareyso habacsananaanta ka jirta shaqadii laga rabay hay’ada Sharci dejinta. – Jowhar News